अभिनेता सुशान्त सिंह आफ्नै घरमा यस्तो अवस्थामा फेला परे, घरमा देखिएको यो दृश्य हेर्नुहोस – Online Nepal
June 15, 2020 441
मुम्बई । बलिउडका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले देहत्याग गरेका छन् । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार मुंबई स्थित आफ्नै निवासमा झु ण्डिएर देहत्याग गरेका हुन् सुशान्त पछिल्लो समय बलिउडमा लोकप्रिय कलाकारका रुपमा चिनिन्थे । रिपोर्टका अनुसार सुशान्तका केही साथीहरु पनि उनकै घरमा थिए ।
सुशान्त सिंह राजपुतको काकाले सुशान्तले यस्तो गर्न नसक्ने बताएका छन् । भारतीय संचारमाध्यम इन्डिया टिभीका अनुशार उनले यो खबर झुट रहेको बताएका हुन् । “सुशान्त सु साइडको बिरुद्धमा बोल्ने मान्छे हो, उस्ले यस्तो काम गर्न नै सक्दैन पुलिसले यो केशलाई गम्भीरता पुर्वक लिएर छानबिन गरोस ।” यो खबर सुनेपछि उनको बुवा बेहोस अवस्थामा छन् भने ४ जना दिदीहरुले उनको लासलाई हेरेर रुदै बसेका छन् ।
उनको कोठाको ढोका खोलेर हेर्दा उनी झु ण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो छ महिनादेखी उनी डि प्रेशनको शिकार भएका थिए । टीवी एक्टरबाट करिअर सुरु गरेका उनले पहिलो पटक ‘किस देश में है मेरा दिल’ नाम के धारावाहिकमा काम गरेका थिए । एकता कपूरको धारावाहिक ‘पवित्र रिश्ता’बाट उनको चर्चा भएको थियो ।
त्यसपछि शुद्ध देसी रोमांस मा वाणी कपूर र परिणीति चोपड़ासंग काम गरे भने सबै भन्दा धेरै चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी को भुमिका निर्वाह गरेर पाए । नीरज पांडेद्वारा निर्देशित एम एस धोनी की बायोपिक सुशांतको करिअरको पहिलो फिल्म थियो, जुन फिल्मले एकसय करोड कमाई गरेको थियो । उनको अन्तिम फिलम फिल्म केदारनाथ थियो । जुन फिल्ममा सारा अली खानसंग काम गरेका थिए ।
सुशान्त सिंह राजपुत यानी की एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरीबाट चम्केका बलिउड स्टार थिए । रिल लाइफमा संघर्ष गरेर स्टार बन्ने राजपुतले रियल लाइफमा भने हरेस खाए । उनी आज मुम्बईस्थित उनकै घरमा मृत भेटिए । बिहारमा जन्मेका ३४ वर्षका राजपुतले बालीउडको शुरुवातमा निकै संघर्ष गरेका थिउ । उनको पहिलो कमाई भनेको २ सय ५० भारु थियो ।
राजपुतले एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए कि संघर्षको दिनमा उनी ६ जनासँग एउटै कोठा शेयर गरेका थिए । उनले त्यसैबेला एक नाटकमा २ सय ५० भारु पाएका थिए । उनी बलिउडका केही चलचित्रमा एक्स्ट्रा डान्सरको रुपमा समेत काम गरेका थिए । उनले सन् २००८ मा टीभीमा पहिलो पटक बालाजी टेलिफिल्म्सको शो किस देश मे है मेरा दिल बाट ब्रेक पाएका थिए ।
राजपुतको करियर २००९ देखि २०११ को बीचमा आएको टीभी शो पवित्र रिश्ताबाट दौडेको थियो । सन् २०१३ मा काई पो छे नामक बलिउड चलचित्रबाट ठूलो पर्दामा उनलाई स्थापित गराएको थियो । सो चलचित्रमा उनको निकै प्रशंसा भएको थियो । मुम्बईको मलाडस्थित २ बीएचके अपार्टमेन्टमा रहेका उनले सन् २०१५ मा पाली हिलमा एक पेन्टहाउस किनेका थिए । यसको लागि उनले २० करोड भारु तिरेका थिए । केही वर्षअघि पैसाको मोहताज भएका राजपुतले करोडौंका घर किन्न सकेका थिए ।
राजपुतले एमएस धोनी र केदारनाथ जस्तो हिट चलचित्र दिएका थिए । उनले पीकेमा आमिर खानसँग पनि काम गरेर तारिफ पाएका थिए । हाल उनी एक चलचित्रका लागि ५ देखि ७ करोड सम्म लिने गर्थे । तर यतिका कमाई भएपनि उनले देहत्याग किन गरियो भन्ने प्रश्न सबैमा आएको छ ।
Prevचन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो कलाकार सुशान्त कुनै समय २५० रुपैयाँ कमाउथे (पुरै जीवनी हेर्नुहाेस)
Nextगौतमलाई ओलीको जवाफ : तपाईंलाई अंग्रेजी नै आउँदैन कसरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ?
अशोककी फुपुले भाग्य न्यौपानेको बिगतदेखि बर्तमान सम्म सम्पुर्ण नालीबीली सुन्दा कस्को आखा नआउला! (हेर्नुहोस भिडियो)